यी हुन् इन्स्टाग्राममा सर्वाधिक फलोवर्स हुने पाँच फुटबलर ! – ramechhapkhabar.com
यी हुन् इन्स्टाग्राममा सर्वाधिक फलोवर्स हुने पाँच फुटबलर !
कतिपय फुटबलरले त फुटबल खेलेर भन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालबाट कमाउने गर्दछन् । पोर्चुगल तथा युभेन्टसका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले इन्स्टाग्रामबाट प्रति पोस्ट १.६ मिलियन कमाउने गर्दछन् । फुटबल विश्वमा सर्वाधिक रुचाइएको खेल हो । आधुनिक समयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट फुटबल समर्थकहरु आफुलाई मन परेकोे खेलाडी र क्लबको गतिविधीबारे जानकार हुन्छन् ।
ट्विटर र इन्स्टाग्राम यसका उदाहरण हुन् । कतिपय फुटबलरले त फुटबल खेलेर भन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालबाट कमाउने गर्दछन् । पोर्चुगल तथा युभेन्टसका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले इन्स्टाग्रामबाट प्रति पोस्ट १.६ मिलियन कमाउने गर्दछन् । त्यसो भए इन्सटाग्राममा सर्वाधिक फलोअर्स भएका फुटबलरहरु को को हुन् त?
१.क्रिस्टियानो रोेनाल्डो -३१४ मिलियन
पेर्चुगल तथा इटालियन क्लब युभेन्टसका स्टार खेलाडी रोनाल्डो इन्स्टाग्राममा सर्वाधिक फलोअर्स हुने पहिलो खेलाडी हुन् । उनको इन्स्टाग्राममा करिब ३१४ मिलियन फलोअर्स रहेका छन् । रोनाल्डोले हालै युरोकपमा सर्वाधिक गोलकर्ता भई गोल्डेन बुट हात पारेका थिए ।
२.लियोेनल मेस्सी -२३२ मिलियन
विश्व फुटबलमा सर्वाधिक सफल खेलाडीकोे रुपमा रहेका अर्जेन्टिनाका कप्तान मेस्सीले स्पेनिश क्लब बार्सिलोेनासँग पनि काफि राम्रो सिजन बिताए ।
उनले यस संस्करणको कोपा अमेरिकाको उपाधिसमेत जितेका छन् । ६ पटकको बलोन डि योर मेस्सी यतिबेला आफ्नो सातौं बलोन डि योरको प्रतिक्षामा छन् । उनको इन्स्टा फलोअर्स २३२ मिलियन रहेकोे छ ।
३.नेयमार -१५४ मिलियन
बार्सिलोनाबाट विश्व किर्तिमाानी रकममा पिएसजी गएका नेयमारले इनज्युरीका कारण हरेक सिजन २० गोलभन्दा धेरै गोल गर्न सकेका छैनन् तर उनले १०० खेल खेल्दा ८७ गोलका साथमा ५२ एसिस्ट प्रदान गरेका छन् । नेयमारले कोपा अमेरिकाको फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग हार बेहोरकोे थियो । नेयमारले इन्स्टाग्रामको एक पोस्टबाट ८ लाख डलर कमाउने गरेका छन् ।
४. एम्बाप्पे -५४.१ मिलियन
विश्वकप २०१८ बाट फ्रान्सको टिममा नायकको रुपमा आएका पीएसजी युवा स्टार एमबाप्पे २०२० युरोमा भने फ्लप भए । उनले पेनल्टी गुमाउँदा फ्रान्स अन्तिम १६ बाटै घर फर्केको थियो ।
एमबाप्पे सानै उमेरमा फुटबल र इन्स्टाग्राम दुबैमा सफलता हासिल गर्ने खेलाडी हुन् उनले विश्वकपकोे फाइनलमा क्रोएशियाबिरुद्ध गोल गर्दै कम उमेरमा फाइनलमा गोल गर्ने रेकर्डसमेत बनाएका थिए ।
५.ज्लाटन इब्रहिमोविच -४८.३ मिलियन
स्विडेन तथा एसी मिलानका खेलाडी ज्लाटन आफ्नो जवाफ दिने कलाका कारण चर्चित छन् । आफ्नो करियरमा कहिल्यै पनि ठुलो उपाधि चुम्नम नसकेको उनी अहिले ४० वर्ष नजिक छन् र उनी इन्स्टाग्रममा चर्चित फुटबलरमध्ये एक हुन् ।